म्यानचेस्टर युनाईटेडले ल्याउन सक्छ त एर्लिंग हालन्ड?
हाम्रो नेपाल स्पोर्ट्स संबाददाता December 22, 2021
हाम्रो नेपाल स्पोर्ट्स, काठमाडौं| अहिले विश्वमै सर्वाधिक क्लबले रुचाइने खेलाडीहरू मध्येका एक, डर्टमन्ड स्टार एरलिङ हाल्याण्ड आफ्नो क्लब सम्झौताको झण्डै अन्त्यमा आइपुगेका छन्।
आफ्नो गोल गर्ने क्षमताले विश्वभरि नै ख्याति कमाएका स्टार हाल्यान्डलाई भित्र्याउनका लागि ठूला क्लबहरु दोहोरी चल्ने लगभग निश्चित रहेको छ।
उनको स्थानान्तरणलाई थप मलजल गर्ने कार्य गरेका छन् उनका एजेन्ट मिनो रायोलाले, जसले विश्व फुटबलमा रहेका अधिकांश स्टारहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने गरेका छन्।
यस सिजनको समाप्तिसँगै डर्टमन्डबाट अर्को क्लबमा स्थानान्तरण गर्न पाउने सर्तमा, उनले बोरुसिया सँग पहिल्यै सम्झौता गरेका थिए।
३ सिजनमा बोरुसियाबाट ७४ खेलमा ७६ गोल गरिसकेका २१ वर्षीय नर्वेजियन स्टारका सामुन्ने विश्वका हरेक शीर्ष क्लब : रियल म्याड्रिड, बार्सिलोना, बायर्न म्युनिख, म्यानचेष्टर यूनाइटेड, सिटी, चेल्सी, पेरिस हरेकको नजर रहेको छ।
यस्तैमा म्यान्चेस्टर युनाईटेडका अहिलेका वर्तमान प्रशिक्षक राल्फ राग्नीकले हालाण्ड क्लबमा भित्र्याउन जोड दिइरहेको बताइएको छ।
अहिलेका वर्तमान प्रशिक्षक राल्फलेनै हालान्डलाई नर्वेबाट सल्जवर्गमा ल्याएका थिए, जहाँ उनको उदय सुरु भएको थियो।त्यसै कारण पनि फेरि उनकै नेतृत्वमा नर्वेजियन स्टार फर्कने हुन् कि भन्ने अडकल सुरु भएको छ।
हुन त एरलिंग म्यान्चेस्टर युनाइटेडसँग जोडिएको यो पहिलो पटक भने होइन। अघिल्ला प्रशिक्षक ओले गनरको व्यवस्थापन समयमा उनी युनाइटेडसँग लगभग गईसकेको अवस्थामा क्लबले चर्को रकमका कारण भित्राउन मानेन।
यसपटक पनि अन्य क्लबहरु सँग चर्को प्रतिस्पर्धा हुने लगभग निश्चित देखिन्छ। उनले म्यानचेष्टर मन नपराएका पनि हैनन। तर उनका एजेन्ट सँगको कुरा नमिलेपछि उनका एजेन्टले उनलाई जर्मनी पुर्याएका थिए।
फ्रान्सका स्टार मिडफिल्डर पल पोगवालाई विश्वकिर्तिमानी रकम मा म्यानचेष्टर युनाइटेडमा ल्याउन पनि एजेन्ट मिनोकै हात रहेको थियो। तर केही समययता म्यानचेष्टर यूनाइटेड, पोगवा र मिनोको सम्बन्ध खासै राम्रो भने देखिँदैन।
उनी हरेक अन्तर्वार्तामा म्यानचेष्टर युनाइटेडलाई गिज्याई रहन्छन् भने आफ्ना खेलाडी पल पोग्बालाई युनाईटेड बाहेक अन्य शिर्ष क्लबहरुमा पनि लान सकिने कुरा बारम्बार दोहोर्याई रहन्छन। क्लब र उनी बीच आन्तरिक द्वन्द्व चलेको छ।
त्यसै कारण पनि एजेन्ट सँगको तीतो समबन्धले पक्कै पनि अबका ट्रान्सफरमा खलबली भने मच्चाउने छ।
अन्य शीर्ष क्लब सँग पैसाको हिसाबमा टक्कर दिने भनेकै अहिले युनाइटेड हो। मैदानमा सफलताको कमी भएपनि पैसाको कमी भने म्यानचेष्टर युनाइटेडलाई अहिलेसम्म खेप्नुपरेको छैन।
यस्तोमा म्यान्चेस्टर युनाइटेडले अब कस्तो पहल चाल्नेछ त्यसले युरोपका दमदार स्टारको आगमनलाई असर अवश्य पार्नेछ।
Posted in अन्तरष्ट्रिय फुटबल, फुटबलTagged #Erling Haaland #hamro nepal sports #manchester united #premier league
क्रिकेटको भविष्य कता तर्फ जाँदैछ? कहिले गर्ने तयारी?
हाम्रो नेपाल स्पोर्ट्स, काठमाडौं| आगामी वर्ष अष्ट्रेलियामा हुने टी ट्वान्टी विश्वकप प्रतियोगितामा छनौट हुनका लागि नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले अबको दुई महिनापछि ग्लोबल छनौट खेल्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। सन् २०१४ मा बिश्वकपमा छनौट भएर सनसनी मचाएको नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले त्यसपश्चात भने उक्त उपलब्धी अहिलेसम्म हात पार्न सकेको छैन। नेपालले […]
युनाईटेडको ब्यबस्थापन प्रति राग्निकको ठुलो खुलासा
अमेरिकी स्टार गायिकाको अपिलमा क्रिस्टियानो रोनाल्डोको उदारता
अनन्त तामांगले इस्ट बंगालबाट आईएसएल खेल्ने
म्यानचेस्टर सिटि र फेयर प्लेको मुद्दा जटिल बन्दै
नेदरल्यान्ड्सलाइ हराउदै चेक रिपब्लिक युरो कपको क्वार्टर फ़ाइनलमा !!